एकाएक किन भेट्दैछ सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीशलाई ? यस्तो छ कारण — Imandarmedia.com
एकाएक किन भेट्दैछ सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीशलाई ? यस्तो छ कारण
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासँग सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिहरुले भेटवार्ता गर्दैछन् । संवैधानिक इजलास पुनर्गठनको सुझाव दिन सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेट्न लागेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले मंगलबार बिहान ११ बजे प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भेट्ने समय तय भएको जानकारी दिए ।
यसअघि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने तयारी गरेका थिए । तर नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीमध्ये दुई जना कोरोनाबाट संक्रमित भएकाले भेट्न नसक्ने भएकाले सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिले मात्र भेट्न लागेको शाक्यले बताए ।
संसद विघटनविरुद्धका मुद्दा हेर्न प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । तर न्यायाधीशहरुको वरिष्ठताको क्रम मिचेर इजलास गठन गरिएपछि त्यसको पुनर्गठनको माग उठेको छ ।
इजलासमा एमाले र माओवादीको एकता रद्द गर्न आदेश दिएका बमकुमार श्रेष्ठ र सो आदेश पुनरावलोकन नहुने फैसला गरेका तेजबहादुर केसीलाई पनि राखिएपछि कानुन व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन् ।
रिटमा बहस गर्ने क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले श्रेष्ठ र केसीलाई इजलासबाट हटाउन माग गरे पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार थालिएको सुनुवाइले आज पनि निरन्तरता पाउँदै छ ।
शुक्रबार र आइतबारको बहस विषय केन्द्रित नभइ इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको सहभागितामै केन्द्रित भएपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेर आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । रिट निवेदक पक्षका वकिल र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालबीच इजलासमै मतभेद भएपछि सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर स्थगित गरिएको थियो ।
तत्कालीन नेकपाको विवादका बारेमा फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको विषयमा रिट दायर गर्ने पक्षका अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा मतभेद भएको थियो । अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, लगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बन्दीको भनाइको पक्षमा उभिएका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले आपत्ति जनाएर उठेपछि केहीबेर विवाद समेत भएको थियो । यसअघि गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।
केसी र श्रेष्ठबारे इजलासमा प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासका पाँच जना न्यायाधीशको छलफल राखेका थिए। सो छलफलमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न उठेपछि दुई जना न्यायाधीश इजलासबाट बाहिरिनु नै उपयुक्त हुने सुझाएका थिए।